ဒူးနာ ခါးနာ ရောဂါသညျမြားအတှကျ အစှမျးထကျတဲ့ သဘာဝ ဆေးနညျး (၈) မြိုး – Daily Feed MM
ဒူးနာ ခါးနာ၍ ဆေးခနျးပွသျောလညျး မသကျသာပဲ ဆေးမတိုးဘဲ ရှိနသေူတှေ သဘာဝ ဆေးနညျးမြားကို အသုံးပွု ခငျြသူတှေ တောငျးဆိုလာသူမြား အတှကျ ဒူးနာ ခါးနာ သဘာဝ ဆေးနညျး (၈) မြိုးကို စုစညျး၍ ပေါငျးစုပွီး မြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျ။
လဖွေတျ လငေနျး လေးဘကျနာ ခါးနာ ဒူးနာရောဂါမြားသညျမြားဖီးကွမျး ငှကျပြောသီး အမှညျ့ကိုဖငျဖွတျ ခေါငျးဖွတျ၍သကျရငျးကွီးရှကျနှငျ့ လုံအောငျလိပျကာ (၅) နာရီခနျ့ ပွုတျ၍ တဈနသေုံ့းလုံးစီ (၅) ရကျဆကျတိုကျစားပေးပါကလဖွေတျလငေနျးလေးဘကျနာ ခါး
နာ ဒူးနာ နာတာရှညျရောဂါမြား ပြောကျကငျးပါသညျ။ ပွုလုပျပုံလှယျကူ၍ အကုနျအကြ နညျးကာ အစှမျးထကျ သကျစောငျ့ဆေးအားမှီဝဲကွပါကုနျ ။
ငါးကွငျးခေါငျးကိုမကွာခဏ ဟငျးခကျြစားခွငျးဒူးနာရောဂါ၊ ဒူးခေါငျးကြီးပေါငျးရောဂါမြားကို ပြောကျကငျးစနေိုငျကွောငျး ရှေးကဆေးကမျြးမြားတှငျ ဖတျရှုရ၍ လကျတှစေ့မျးကွညျ့ရာ ဒူးထဲမှ ….ကုနျခမျးနသေော ရိုးတှငျး ခဉျြဆီမြားအား ပွနျလညျ ပွညျ့ဝလာ၍ အမှနျ
တကယျ ပြောကျကငျးခဲ့ပါသညျ။ ဆေးရုံ (၃) လလောကျတကျခဲ့ရတဲ့ အသိတဈယောကျ ဒီနညျးနဲ့ ပြောကျသှားပါတယျ။ (၃) ပတျလောကျ ဒူးနာနတေဲ့ ကနြေျာ့ယောက်ခမလညျး ဒီနညျးနဲ့ပဲ ပြောကျသှားတယျ။
ဆေးနညျးကတော့ ဂငျြးတကျနဲ့ မွဖွေူခဲကို ရောထောငျးပွီး နာနတေဲ့ဒူးပျေါကို တဈနေ့ (၂) ကွိမျ လိမျးပေးပါ။ (၃) ရကျအတှငျး သိသာလာမယျ။ တဈပတျလောကျဆိုပွီ ပြောကျပွီ။
ခှေးတောကျရှကျ လကျတဈဆုပျခနျ့ကို ထုထောငျး၍ …. အရညျညှဈယူကာ ၄ငျးအရညျဖွငျ့ သနပျခါးသှေးကာ ဒူးပျေါကို လိမျးပေးပါ။ မနကျရခြေိုးပွီးတဈကွိမျ၊ ညအိပျခါနီးတဈကွိမျ လိမျးပေးပါ။ တဈပတျခနျ့လိမျးပေးလြှငျ ဒူးနာသကျသာ ပြောကျကငျးစမေညျ။
ရှားစောငျးလကျပပျ လတျလတျဆတျလတျကို ခူးယူ၍….အပျေါအခှံကိုခှါပွီး အတှငျးသားဂယျြလီကို ဇှနျးဖွငျ့ခွဈယူ၍ ကြိုခကျြထားသော နှားနို့အအေးနှငျ့ သောကျပါ။ (၅) ရကျခနျ့သောကျလြှငျ ဒူးနာသကျသာလာမညျ။
ဒူးနာ၊ ခါးနာပကျြေကငျးစမေညျ့ သဘာဝဆေးနညျး
(က) သင်ျဘောသီးအစိမျးတဈလုံးကို ထိပျပိုငျးနရောမှ ကွကျဥတဈလုံးစာခနျ့ ပိုငျးဖွတျလိုကျပါ။ အတှငျးမှ အစမြေ့ားကိုလညျး မထုတျပဲ ထားပါ။
(ခ) ကွကျဥကို ထညျ့လိုကျပါ။ (သဘာဝ ကွကျဥ၊ တောကွကျဥဆိုလြှငျပိုကောငျးပါသညျ)
(ဂ) ပိုငျးဖွတျထားသညျ့ အပိုငျးဖွငျ့ ပွနျအုပျလိုကျပါ။ သူ့အစေးနှငျ့သူ ပွနျကပျပါသညျ။ ပိုပွီး စိတျခခြငျြလြှငျ ရှံ့စေးမြားဖွငျ့ အုပျပေးထားနိုငျပါသညျ။
(ဃ) ၄ငျးသင်ျဘောသီးကို မီးသှေးမီးဖိုထဲမှာ မီးဖုတျပေးပါ။ ပြော့အိပွီး အတှငျးမှ ကွကျဥ ကကျြသှားသညျ့အထိ ဖုတျပါ။
(င) ပွီးလြှငျ အခှံကို ခှါခလြိုကျပွီး အတှငျးမှ ကွကျဥကို စားရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈပတျကို တဈကွိမျ အနညျးဆုံး (၃)ကွိမျခနျ့ စားပေးပါက ဒူးနာ၊ ခါးနာပြောကျကငျး သှားပါလိမျ့မယျ။
သံပုရာသီးကို ထကျခွမျးပိုငျး၍ ၄ငျးသံပုရာခွမျးဖွငျ့ နာနသေညျ့ ဒူးပျေါကို အရညျမြားကုနျခမျးသညျ့အထိ ညငျသာစှာ ပှတျတိုကျပေးပါ။ ပွီးလြှငျ … (ဆရာခို-အနာလိမျးဆေး) သို့မဟုတျ ဒဏျကွဆေေးတဈမြိုးမြိုးဖွငျ့ လိမျးပေးပွီး (၁၅) မိနဈခနျ့ အ၀တျပါးပါး၊
ပတျတီးစီးထားပါ။ အထူးသဖွငျ့ ညအိပျခါနီး လိမျးပေးလြှငျ ပိုထိရောကျပါတယျ။ တဈပတျခနျ့လိမျးပေးလြှငျ ဒူးနာ ပြောကျကငျး စပေါမညျ။
ဒူးနာ ဒူးနာသူမြားအတှကျ ဆေးမွီးတို (နောကျတနညျး) ခါးနာ ဒူးနာ သူမြားအတှကျ မခကျပါ …. ဘဲဥ ကိုပှကျနသေော ရနှေေးအိုးထဲ့ကို (၂) မိနဈခနျ့ပွုတျလိုကျပွီး ဆယျယူလိုကျပါ ၊ ဆယျယူလိုကျသညျ့ ဘဲဥကို ပနျးကနျလုံးထဲ့ကို ဖောကျထညျ့လိုကျပါ စားကောငျးစေ
ရနျ သကွား အနညျးငယျ သငျစားကောငျးစေ လောကျသညျ့ အနအေထားသို့ထညျ့ပွီး ခေါကျစား လိုကျပါ။ တခွား မညျသညျအရာမှ ရောစပျပွီး မစားရပါ ဘဲဥ တဈလုံးကိုတော့ ကုနျအောငျ စားရပါလိမျ့မညျ။ တဈနလြေှ့ငျ ဘဲဥ တဈလုံးကို ကုနျအောငျ စားလိုကျပါ ထို
နညျး အတိုငျး နစေ့ဉျ ဘဲဥတဈလုံးစီ စားသုံးရမညျ၊ အနညျးဆုံး မိမိအသကျ၏ တ၀ကျ အလုံးရအေထိ စားသုံးရမညျ၊ ဥပမာ။ အသကျ (၄၀)-နှဈရှိလြှငျ အနညျးဆုံး ဘဲဥ အလုံးရေ (၂၀ ) စားသုံးရမညျ၊ (ထိုထကျ မြားမြားစားသုံးနိုငျလြှငျ ပိုကောငျးပါသညျ။) ဘဲဥ စား
သုံးခွငျးသညျ လိုအပျသော ခွငျဆီဓာတျအတှကျ ပွနျလညျ ဖွဈပျေါစရေနျ ဖွဈပါသညျ ။ ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခွငျးဖွငျ့ ခါး-ဒူးတို့တှငျ ရိုးတှငျးခွငျဆီ ခနျးခွောကျခွငျးကို ပွနျလညျဖွညျ့တငျး ပေးပွီး ခါးနာ ဒူးနာမြား ရောဂါမြား သကျသာ ပြောကျကငျး သှားပါလိမျ့မညျ။
ဒူးနာ ခါးနာ၍ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မသက်သာပဲ ဆေးမတိုးဘဲ ရှိနေသူတွေ သဘာဝ ဆေးနည်းများကို အသုံးပြု ချင်သူတွေ တောင်းဆိုလာသူများ အတွက် ဒူးနာ ခါးနာ သဘာဝ ဆေးနည်း (၈) မျိုးကို စုစည်း၍ ပေါင်းစုပြီး မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
လေဖြတ် လေငန်း လေးဘက်နာ ခါးနာ ဒူးနာရောဂါများသည်များဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီး အမှည့်ကိုဖင်ဖြတ် ခေါင်းဖြတ်၍သက်ရင်းကြီးရွက်နှင့် လုံအောင်လိပ်ကာ (၅) နာရီခန့် ပြုတ်၍ တစ်နေ့သုံးလုံးစီ (၅) ရက်ဆက်တိုက်စားပေးပါကလေဖြတ်လေငန်းလေးဘက်နာ ခါး
နာ ဒူးနာ နာတာရှည်ရောဂါများ ပျောက်ကင်းပါသည်။ ပြုလုပ်ပုံလွယ်ကူ၍ အကုန်အကျ နည်းကာ အစွမ်းထက် သက်စောင့်ဆေးအားမှီဝဲကြပါကုန် ။
ငါးကြင်းခေါင်းကိုမကြာခဏ ဟင်းချက်စားခြင်းဒူးနာရောဂါ၊ ဒူးခေါင်းကျီးပေါင်းရောဂါများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ကြောင်း ရှေးကဆေးကျမ်းများတွင် ဖတ်ရှုရ၍ လက်တွေ့စမ်းကြည့်ရာ ဒူးထဲမှ ….ကုန်ခမ်းနေသော ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီများအား ပြန်လည် ပြည့်ဝလာ၍ အမှန်
တကယ် ပျောက်ကင်းခဲ့ပါသည်။ ဆေးရုံ (၃) လလောက်တက်ခဲ့ရတဲ့ အသိတစ်ယောက် ဒီနည်းနဲ့ ပျောက်သွားပါတယ်။ (၃) ပတ်လောက် ဒူးနာနေတဲ့ ကျနော့်ယောက္ခမလည်း ဒီနည်းနဲ့ပဲ ပျောက်သွားတယ်။
ဆေးနည်းကတော့ ဂျင်းတက်နဲ့ မြေဖြူခဲကို ရောထောင်းပြီး နာနေတဲ့ဒူးပေါ်ကို တစ်နေ့ (၂) ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ (၃) ရက်အတွင်း သိသာလာမယ်။ တစ်ပတ်လောက်ဆိုပြီ ပျောက်ပြီ။
ခွေးတောက်ရွက် လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ကို ထုထောင်း၍ …. အရည်ညှစ်ယူကာ ၄င်းအရည်ဖြင့် သနပ်ခါးသွေးကာ ဒူးပေါ်ကို လိမ်းပေးပါ။ မနက်ရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ်၊ ညအိပ်ခါနီးတစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။ တစ်ပတ်ခန့်လိမ်းပေးလျှင် ဒူးနာသက်သာ ပျောက်ကင်းစေမည်။
ရှားစောင်းလက်ပပ် လတ်လတ်ဆတ်လတ်ကို ခူးယူ၍….အပေါ်အခွံကိုခွါပြီး အတွင်းသားဂျယ်လီကို ဇွန်းဖြင့်ခြစ်ယူ၍ ကျိုချက်ထားသော နွားနို့အအေးနှင့် သောက်ပါ။ (၅) ရက်ခန့်သောက်လျှင် ဒူးနာသက်သာလာမည်။
ဒူးနာ၊ ခါးနာပျေက်ကင်းစေမည့် သဘာဝဆေးနည်း
(က) သင်္ဘောသီးအစိမ်းတစ်လုံးကို ထိပ်ပိုင်းနေရာမှ ကြက်ဥတစ်လုံးစာခန့် ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါ။ အတွင်းမှ အစေ့များကိုလည်း မထုတ်ပဲ ထားပါ။
(ခ) ကြက်ဥကို ထည့်လိုက်ပါ။ (သဘာဝ ကြက်ဥ၊ တောကြက်ဥဆိုလျှင်ပိုကောင်းပါသည်)
(ဂ) ပိုင်းဖြတ်ထားသည့် အပိုင်းဖြင့် ပြန်အုပ်လိုက်ပါ။ သူ့အစေးနှင့်သူ ပြန်ကပ်ပါသည်။ ပိုပြီး စိတ်ချချင်လျှင် ရွံ့စေးများဖြင့် အုပ်ပေးထားနိုင်ပါသည်။
(ဃ) ၄င်းသင်္ဘောသီးကို မီးသွေးမီးဖိုထဲမှာ မီးဖုတ်ပေးပါ။ ပျော့အိပြီး အတွင်းမှ ကြက်ဥ ကျက်သွားသည့်အထိ ဖုတ်ပါ။
(င) ပြီးလျှင် အခွံကို ခွါချလိုက်ပြီး အတွင်းမှ ကြက်ဥကို စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် အနည်းဆုံး (၃)ကြိမ်ခန့် စားပေးပါက ဒူးနာ၊ ခါးနာပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မယ်။
သံပုရာသီးကို ထက်ခြမ်းပိုင်း၍ ၄င်းသံပုရာခြမ်းဖြင့် နာနေသည့် ဒူးပေါ်ကို အရည်များကုန်ခမ်းသည့်အထိ ညင်သာစွာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် … (ဆရာခို-အနာလိမ်းဆေး) သို့မဟုတ် ဒဏ်ကြေဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လိမ်းပေးပြီး (၁၅) မိနစ်ခန့် အ၀တ်ပါးပါး၊
ပတ်တီးစီးထားပါ။ အထူးသဖြင့် ညအိပ်ခါနီး လိမ်းပေးလျှင် ပိုထိရောက်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ခန့်လိမ်းပေးလျှင် ဒူးနာ ပျောက်ကင်း စေပါမည်။
ဒူးနာ ဒူးနာသူများအတွက် ဆေးမြီးတို (နောက်တနည်း) ခါးနာ ဒူးနာ သူများအတွက် မခက်ပါ …. ဘဲဥ ကိုပွက်နေသော ရေနွေးအိုးထဲ့ကို (၂) မိနစ်ခန့်ပြုတ်လိုက်ပြီး ဆယ်ယူလိုက်ပါ ၊ ဆယ်ယူလိုက်သည့် ဘဲဥကို ပန်းကန်လုံးထဲ့ကို ဖောက်ထည့်လိုက်ပါ စားကောင်းစေ
ရန် သကြား အနည်းငယ် သင်စားကောင်းစေ လောက်သည့် အနေအထားသို့ထည့်ပြီး ခေါက်စား လိုက်ပါ။ တခြား မည်သည်အရာမှ ရောစပ်ပြီး မစားရပါ ဘဲဥ တစ်လုံးကိုတော့ ကုန်အောင် စားရပါလိမ့်မည်။ တစ်နေ့လျှင် ဘဲဥ တစ်လုံးကို ကုန်အောင် စားလိုက်ပါ ထို
နည်း အတိုင်း နေ့စဉ် ဘဲဥတစ်လုံးစီ စားသုံးရမည်၊ အနည်းဆုံး မိမိအသက်၏ တ၀က် အလုံးရေအထိ စားသုံးရမည်၊ ဥပမာ။ အသက် (၄၀)-နှစ်ရှိလျှင် အနည်းဆုံး ဘဲဥ အလုံးရေ (၂၀ ) စားသုံးရမည်၊ (ထိုထက် များများစားသုံးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်။) ဘဲဥ စား
သုံးခြင်းသည် လိုအပ်သော ခြင်ဆီဓာတ်အတွက် ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဖြစ်ပါသည် ။ ထိုကဲ့သို့ စားသုံးခြင်းဖြင့် ခါး-ဒူးတို့တွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ခန်းခြောက်ခြင်းကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်း ပေးပြီး ခါးနာ ဒူးနာများ ရောဂါများ သက်သာ ပျောက်ကင်း သွားပါလိမ့်မည်။